Kala Sadbursiga Bulshada iyo eexdu Waxay Abuuran Niyad Xumo Iyo Farxad La’aan. – Xeernews24
31. August 2018 /in Qormooyin/Articles /von admin
Jonathan Rauch oo ah madaxa cilmibaadhayaasha maxadka Brookings ayaa sheegay in tobannaankii sanno ee u dambeeyey ay kala go’ayeen koritaanka dhaqaale ee qofka iyo heerka farxaddiisu. Intii ka dambaysay dagaalkii labaad ee adduunkana ay meesha ka baxday raadayntii ay haynta qofku ku lahayd farxaddiisa. Waxa uu tusaale u soo qaatay in intii ka dambaysay kontonaadkii qarnigii hore uu dakhligii qofku saddex laab kordhay, laakiin celceliska tirada dadka farxadda iyo niyadsamaanta dareensani ay hoos u dhacday.
Cabdi Iley oo maxkamadi ka diiday dalab ahaa in damaanad lagu sii daayo. Sawirro: kulanka FARMAAJO iyo dhigiisa dalka Shiinaha.